AHOANA NY FOMBA HANERENA NY FAMPIHARANA MAC AMIN'NY ALÀLAN'NY HITSIN-DÀLAN'NY KEYBOARD - MALEMY
Indraindray dia tsy mamaly ny baikonao ny rindranasa amin'ny Mac anao ary tsy afaka manafoana ireo rindranasa ireo ianao. Ankehitriny, tsy mila mikoropaka ianao, raha sendra trangan-javatra toy izany ianao, satria ireto misy fomba enina ahafahanao miala amin'ny lahasa iray na tranokala na programa iray amin'ny hitsin-dàlana fitendry fotsiny. Tsy maintsy manana fisalasalana ianao raha azo antoka ny fialana an-keriny ny fampiharana na tsia? Ka misy fanazavana ny fisalasalanao toy izao:
esory ny karazana rakitra Windows 10
Ny hery miala amin'ny fampiharana tsy misy valiny dia mitovy amin'ny famonoana ireo viriosy rehefa marary isika. Mila mahita fomba fijery malalaka momba an'io ianao ary mahatakatra hoe inona ny tena olana ary ahoana no fomba hikarakaranao azy mba tsy hiverenany intsony.
Ka ianao no antony aza ampy tadidy ao anaty mac-nao (tsy ampy ny RAM) . Izany dia mitranga rehefa tsy ampy fahatsiarovana ny mac-nao hiasa amin'ny rindranasa vaovao. Ka isaky ny mihazakazaka ny lahasa amin'ny mac-nao ianao dia manjary tsy mandray andraikitra ny rafitra ary mivaingana. sary an-tsaina ram amin'ny maha-zavatra ara-batana anao izay manana toerana voafetra hipetrahana na hitazonana zavatra avy eo, dia tsy azonao atao ny manery ilay zavatra hanitsy zavatra maromaro amboniny. Toy izany RAM an'ny mac-nao izany dia tsy afaka mampiasa rindranasa mihoatra ny fahaizany.
Fomba 1: azonao atao ny manery ny fialana amin'ny fampiharana amin'ny Apple Menu
Fomba 2: Command + Option + Escape
Fomba 3: azonao atao ny manakatona ny App Mac mavitrika ankehitriny miaraka amin'ny fanampian'ny Keyboard anao
Fomba 4: Azonao atao ny manery ny hiala amin'ny rindrambaiko avy amin'ny dock
Fomba 5: azonao atao ny mampiasa ny Monitor an'ny Aktivitas mba hanery ny fampiharana Quit
Fomba 6: azonao atao ny mampiasa ny Terminal & mamono Command
Mba hisorohana ny rindranasa tsy mamaly dia tokony hofongaranao foana ireo entana izay tsy ilainao intsony amin'ny mac-nao na azonao atao ihany koa ny manangona ireo rakitra ao anaty pen-nao mba hanananao toerana ampy handefasana rindranasa maro. Raha tsy manao izany dia indraindray mety hiteraka fahaverezan'ny tahiry voatahiry ihany koa. Noho izany, manaraka ireto ny fomba enina ahafahanao manery ny hiala amin'ny rindrambaiko amin'ny Mac rehefa tsy mamaly izy ireo:
Ireto misy ny dingana hampiharana an'io fomba io:
Ity dia iray amin'ireo fomba mora tadidy indrindra saingy tsy io no fomba mahery vaika indrindra satria mety hitranga fa tsy mamaly ilay rindranasa ary tsy afaka mahazo fidirana ny menio.
Windows 10 lesoka fanombohana menio
Ity fomba ity dia mora kokoa noho ny fampiasana ny Monitor Monitor. Ary koa, ity dia keypress iray tena tsotra tadidy. Ity keypress ity dia mamela anao hanafoana fampiharana marobe indray mandeha.
Ity keypress ity no hitsin-dàlana tsara indrindra hialana amin'ny lahasa na fizotrany na tranokala na daemon an-kery.
Ity dia iray amin'ireo fomba mora indrindra hanafoanana ireo fampiharana. Ireto misy ny dingana hampiharana an'io fomba io:
Azo antoka fa hanampy amin'ny famaranana avy hatrany ny fampiharana izany.
Ataovy ao an-tsaina fa tsy maintsy tsindrio ity bokotra fanalahidy ity raha ny fampiharana tianao hakatona no hany fampiharana ao amin'ny Mac anao amin'izany fotoana izany, satria io fanindriana bokotra io dia hanery ny fialana amin'ireo rindranasa rehetra izay miasa amin'izao fotoana izao.
Keystroke: Command + Option + Shift + Escape mandra-pikaton'ny fampiharana an-keriny.
Ity dia iray amin'ireo fomba haingana indrindra nefa mora indrindra hanakatonana ireo rindranasa ao amin'ny Mac anao. Ary koa, izy dia keypress tena tsotra tsaroana.
Vakio ihany koa: Ahoana ny fomba hamonoana ny safidiko Find my iPhone
Araho ireto dingana manaraka ireto hampiharana an'io fomba io:
Amin'ny fampiasana an'io fomba io, ny fampiharana dia hajanona an-kery tsy misy fanamafisana, noho izany dia mila mahazo antoka ianao alohan'ny hampiharana an'io fomba io.
Ny Action Monitor dia iray amin'ireo fomba mahery vaika hialana amin'ny fampiharana, asa na fizotra an-kery izay mandeha amin'ny Mac-nao. Azonao atao ny mahita sy manindry azy ao amin'ny Applications na Utilities NA azonao atao ny manokatra azy io amin'ny alàlan'ny fanindriana ny Command + Space ary avy eo dia soraty ny 'Action Monitor' ary avy eo tsindrio ny bokotra miverina. Ity fomba ity dia tena mandaitra. Raha tsy manery ny hiala amin'ny fampiharana ireo fomba voalaza etsy ambony ireo dia azo antoka fa handeha io fomba io. Ary koa, dia tsotra be ny fampiasana Monitor Monitor. Ireto misy ny dingana hampiharana an'io fomba io:
Amin'ity baiko famonoana olona ity dia tsy mandeha ny safidy fitahiry mandeha ho azy, tokony hitandrina tsara ianao sao ho very ny angona manan-danja tsy voatahiry. Matetika izy io dia miasa amin'ny haavon'ny rafitra. Ireto misy ny dingana hampiharana an'io fomba io:
Ka izao no fomba enina ahafahanao manery ny hiala amin'ny rindrambaiko amin'ny mac anao rehefa tsy mamaly izy ireo. Amin'ny ankapobeny, ny fampiharana anao mangatsiaka dia azo esorina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fomba etsy ambony fa raha mbola tsy azonao terena hiala ilay fampiharana dia tokony hitsidika ianao Apple Support .
Raha izao, raha mbola tsy mahavita manery ny fampitsaharana ny fampiharana ny mac na dia efa nampihatra ireo fomba rehetra ireo aza ianao dia mila mifandray amin'ny mpandraharaha mac anao. Tokony hiezaka ny hiantso ny laharan'ny serivisy ho an'ny mpanjifany ianao ary raha tsy afaka manampy anao izy ireo dia tokony hifandray amin'ny Apple Support. Azonao atao ny mamintina fa misy olana mifandraika amin'ny fitaovana miaraka amin'ny Mac raha toa ka tsy mandeha ny fomba rehetra voalaza etsy ambony.
Recommended: Amboary ny iPhone tsy afaka mandefa hafatra SMS
Aleo manandrana ny fomba tsirairay alohan'ny handehanana any amin'ny fivarotana fitaovana ary handroahana vola tsy ilaina. Noho izany, ireo fomba ireo dia hanampy amin'ny famahana ny olanao amin'ny fomba mahomby indrindra.
ny fomba fanamboarana ny lesoka itunes 0xe80000a
Ahoana no fomba hialako amin'ny mpanonta hp ahy amin'ny fanjakana diso?
ny fomba fampiasana verifier mpamily
Windows Update 1809 tsy miseho
mpamily nvidia nianjera tamin'ny windows 10 2018
efijery mainty varavarankely misy fanamboarana ny cursor